नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू | YouTube सदस्यहरू किन्नुहोस्
हाम्रो प्रिमियम सेवाहरू
#1 वास्तविक मानिसहरूसँग तपाईंको YouTube च्यानल बढाउनको लागि सेवा, द्रुत रूपमा!
SubPals एक नि:शुल्क YouTube सदस्य वृद्धि प्लेटफर्म हो जुन वास्तविक व्यक्तिहरूको संलग्नता मार्फत तपाईंको च्यानल किक-स्टार्ट गर्न डिजाइन गरिएको हो! अब आफ्नो विकास यात्रा सुरु गर्नुहोस्।
हाम्रो नि: शुल्क YouTube ग्राहक सेवाको मुख्य विशेषताहरू
सबपल्सले एक नवीन नेटवर्क प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई प्रत्येक १२ घण्टामा १० नयाँ र नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ! सेवा नि: शुल्क हो र केहि धेरै किफायती भुक्तान विकल्पहरू जो जो अझ दैनिक दैनिक ग्राहकहरू चाहान्छन्।
उपपलहरू मानवीय रूपमा सम्भव हुने रूपमा डिजाइन गरिएको थियो! तपाईंको समय महत्त्वपूर्ण छ र हामी त्यो बुझ्दछौं, त्यसैले हामीले तपाईंको समयको केवल केहि मिनेटको लागि 10 + नि: शुल्क यूट्युब ग्राहकहरू प्रदान गर्न नेटवर्क सिर्जना गर्नुभयो।
हाम्रो निःशुल्क एसई नेटवर्कले तपाइँ र अन्य अन्य टिप्स बीचको एक आदान प्रदान प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको ग्राहकहरु बढ्न खोज्दै छन्, त्यसैले तपाइँ अन्य YouTube च्यानल मालिकहरू बाट सदस्यता प्राप्त गर्नुहुनेछ। अधिक YouTube ग्राहकहरू प्राप्त गर्न यो प्रभावकारी तरिका हो!
नि:शुल्क YouTube सदस्यहरू प्राप्त गर्न SubPals प्रयोग गर्नु तपाईंको YouTube खाताको लागि 100% सुरक्षित छ। हाम्रो नेटवर्क सधैं प्रयोग गर्न र सुरक्षित छ भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाईं विश्वस्त महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
परिणामहरू तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ
जब तपाइँ आफ्नो च्यानलको लागि निशुल्क वा भुक्तान गरिएको योजना सक्रिय गर्नुहुन्छ, तपाइँले आफ्नो च्यानलको ग्राहक गणनाको उही दिन बढ्दै जान्नुहुनेछ! प्रत्येक योजनाले तपाइँको च्यानलको विश्वसनीयता र जोखिम बढाउन चाँडै काम गर्दैछ।
हाम्रो अनुकूल टीम यहाँको लागि यहाँ छ! यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा कुनै पनि चीजको साथ सहयोग चाहिन्छ, हामी भर्खरै एउटा इमेल हो। जब तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तपाई सधैँ एक समयमै प्रतिक्रियाको आशा गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क ग्राहकहरू प्राप्त गर्न सरल चरणहरू
सदस्यता लिनुहोस् र भिडियोहरू मनपराउनुहोस्
60 सेकेन्ड पछि, तपाईं सकियो!
पछाडि बस्नुहोस् र आफ्नो नि: शुल्क सदस्यता प्राप्त गर्नुहोस्
म अहिले नि: शुल्क सदस्यहरू चाहन्छु
नि: शुल्क YouTube सदस्यहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाको 10
जीवनमा उत्तम चीजहरू निःशुल्क छन्; र सोशल मिडियाको उदयको साथ, नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरू भन्दा राम्रो के हो? ठीक छ, तपाईं कम्तिमा कम्तिमा केही चीजहरू नामकरण गर्न सक्नुहुनेछ; तर बिन्दु हो, YouTube को जस्तै सोशल मिडिया साइटहरूमा तपाइँको निम्न, आजको संसारमा छिटो महत्त्वपूर्ण भएको छ।
"YouTube मा यति धेरै सामग्री छ। र यो वास्तव मा सबैको लागि केहि छ। र व्यक्तिहरू मसँग सधै आउँदछन् र मसँग कुरा गर्छन् कि कसरी YouTube ले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गरेको छ, कसरी तिनीहरू केही सिक्न सक्षम भएका छन् उनीहरूलाई आफूले सोचेजस्तो नहुन सक्छ। "
पाँच अर्ब। त्यो यूट्यूब भिडियो को संख्या हो कि आज सम्म साइट मा साझा गरीएको छ। फेब्रुअरी १४, २००५ मा यसको स्थापना पछि, लोकप्रिय भिडियो-साझेदारी प्लेटफर्म नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई जो एक प्रभावशाली गति मा सामग्री उत्पन्न आकर्षित गर्न को लागी जारी छ। यूट्यूब संग संसारको प्रेम सम्बन्ध छैन किनकि यो भ्यालेन्टाइन डे मा बनाईएको हो। यो बुझ्न को लागी यो किन यो प्रयोगकर्ताहरु संग जोडिएको र सूचित रहन को लागी एक यस्तो आवश्यक उपकरण बन्यो।
वास्तवमा, प्यू अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार, २०% भन्दा बढि वयस्क प्रयोगकर्ताहरूले संकेत गरे कि तिनीहरूले समाचारको लागि नियमित स्रोतको रूपमा YouTube प्रयोग गर्छन्। त्यो YouTube लाई समाचारको लागि दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको सोशल मिडिया साइट बनाउँदछ, फेसबुक पछाडि, जहाँ एक ठूलो adult 20% वयस्क प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको समाचार प्राप्त गरेको दावी गर्छन्। अधिक के छ, ओमनिकोरका अनुसार, nn% सहस्राब्दीले परम्परागत टेलिभिजन हेर्न YouTube भिडियोहरू हेर्न रुचाउँछन्।
के गर्छ, कहाँबाट उनीहरूको समाचार पाउनुहोस्, नि: शुल्क YouTube अनुयायीहरूसँग गर्ने? राम्रो, यो एक राम्रो विचार हो कि प्रभाव YouTube को पूर्ण बुझ्न हाम्रो संस्कृतिमा छ, र हाम्रो संस्कृति कसरी जानकारीमा लिन्छ। यो ज्ञानको साथ, तपाईं प्रभावकारी दर्शकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
तथ्याङ्कहरूले साबित गरेको छ कि संसारमा के हुँदैछ भन्ने बारेमा YouTube जान्नका लागि अधिक से अधिक व्यक्ति YouTube को साइटहरूमा बदलिन्छन्, तर यो त्यहाँ रोक्न सक्दैन। YouTube प्रयोगकर्ताहरूले कसरी सबै प्रकारको टुक्रा जानकारीको बारे सबैलाई कसरी प्रकाश फिक्स्चर स्थापना गर्ने भन्ने बारे सिकेका छन्, कसरी गर्ने-कसरी मेनु मेकअप गर्न। तर अब, धेरै भन्दा बढि, प्रयोगकर्ताहरू व्यवसाय र ब्रान्ड बारे सिक्न YouTube भिडियोहरू हेर्दै छन्।
तपाइँको कम्पनीलाई बढावा दिन यो उत्तम स्थान हो। भिडियो कथाकारले प्रस्तावित र मनोरञ्जनको आदर्श संयोजन प्रदान गर्दछ, र भिडीयो सबै भन्दा कम समयको सबैभन्दा अधिक जानकारी प्रदान गर्दछ। यूट्यूबको माध्यमबाट, तपाइँ आफ्ना दर्शकहरूलाई तपाईंको कम्पनीको संस्कृतिमा अनन्य रूप देखाउन र जानकारी साझा गर्नुहुने तिनीहरू सामान्य वा मुद्रण वा डिजिटल विज्ञापनबाट पाउनेछन्।
जबकि YouTube अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरूसँग जडानको लागि उत्कृष्ट छ, तपाईंले प्रतियोगिताको लागि तयारी गर्नु पर्छ। लगभग% 63% व्यवसायहरूले यूट्यूबलाई उनीहरूको मार्केटि strate रणनीतिमा समावेश गरिसकेका छन, र त्यो संख्या बढ्नेछ।
यति धेरै जानकारीहरू एक पटक साइटको माध्यमबाट फ्यान गरिन्छ, बाहिर उभिन लगभग असम्भव छ। प्रत्येक मिनेटमा करीव hours०० घण्टाको भिडियो अपलोड हुन्छ। यदि तपाईं गणित गर्नुहुन्छ भने, त्यो दिनमा ,300००,००० घण्टा भन्दा बढी छ, र प्रति वर्ष लगभग १400,000,००,००० घण्टा। तपाईंले २०१ 158,000,000 मा मात्र खाताको लागि YouTube भिडियोहरू हेर्न १ watching,००० वर्ष खर्च गर्नुपर्नेछ। चित्र प्राप्त गर्नुहोस्?
तपाईं यो कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ; युट्युबमा नि: शुल्क ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने आठवटा महत्त्वपूर्ण कारणहरूका लागि पढ्नुहोस्।
ठूलो ठूलो बनाउनुहोस्
नि: शुल्क ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने पहिलो कारण एकदम सीधा छ - तपाईं निम्न एउटा बढी च्यानल सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ! तपाईं नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, वा सायद तपाईंसँग पहिल्यै एक YouTube च्यानल छ, तर कर्षण प्राप्त गर्नमा समस्या छ, केहि अतिरिक्त ग्राहकहरूले बलियो संलग्नता र एक स्वस्थ पछि विकास गर्न एक लामो तरिकामा जान सक्छ।
YouTube को एल्गोरिदमले फराकिलो दर्शकहरूलाई तिनीहरूको सामग्री प्रदर्शन गरेर धेरै सदस्यहरू भएका च्यानलहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले स्नोबल प्रभाव सिर्जना गर्दछ किनभने जति धेरै मानिसहरूले तपाईंको च्यानल हेर्छन्, उनीहरूले यसलाई पनि सदस्यता लिने सम्भावना बढी हुन्छ।
तपाईं अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरूमा हेर्न चाहनु हुन्छ
त्यहाँ धेरै सामाजिक सञ्जाल साइटहरू प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि एकसाथ जोडिएको हुन सक्छ। यसले प्लेटफर्महरूमा सामग्री साझेदारी गर्न सजिलो बनाउँछ, र तुरुन्तै तपाईंको दर्शकहरूको आकार बढाउँछ। यदि एक भिडियो YouTube मा लोकप्रिय छ भने, एक अत्यन्त उच्च मौका छ कि ग्राहकहरूले भिडियोलाई तिनीहरूको सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा पोस्ट गर्नेछ। अधिक YouTube ग्राहकहरूले अधिक व्यक्तिहरूको अर्थ राख्दछन् जुन सम्भावित रूपमा अन्य प्लेटफार्महरूमा तपाइँका भिडियोहरू फैलाउन मद्दत गर्न सक्दछ। चाँडै, भिडियो प्रतीत हुन्छ हरेक ठाँउमा, र तपाईं वायरल जाँदाको मौका पनि खडा गर्नुहुन्छ।
यो प्रत्येक YouTuber सपना हो। भाइरल हुनुहोस्, तपाईंको सामग्री लाखौंले हेर्न पाउनुहोस्, र युट्युब ईतिहासमा हाम्रो समयको आइकॉनिक भिडियोहरूको साथ तल झर्नुहोस् जस्तै “चार्ली बिट माय फिंगर” र “हार्लेम शेक।” यो केवल "१ 15 मिनेट प्रसिद्धि" जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकतामा धेरै उपभोक्ताहरूले उत्पादनहरू हेर्छन् र सामाजिक मिडियामा उनीहरूको बारेमा सिकिसकेपछि खरीद निर्णयहरू गर्छन्।
कहिलेकाहीँ यो रहस्य हो कि किन केहि चीजहरू भाइरल हुन्छन्, तर सामान्यतया भन्नुपर्दा, हत्यारा सामग्री भएका उच्च-गुणस्तरका भिडियोहरू ध्यान दिइन्छ। तर, तपाइँका भिडियोहरू जतिसुकै कलात्मक रूपमा कम्पाइल गरिएका भए पनि, यदि तपाइँसँग सभ्य सदस्य संख्या छैन भने, यो शंका छ कि कसैले तपाइँका भिडियोहरू देख्नेछन्। धेरै फलोअरहरू प्राप्त गर्नु भनेको तपाईंको YouTube च्यानल धेरै YouTuber को "सुझाव गरिएको सामग्री" मा देखिने छ। त्यो स्नोबल प्रभाव बन्द हुन्छ, र तपाईले थाहा पाउनु अघि तपाईको ब्रान्डका भिडियोहरू लाखौं मानिसहरूद्वारा संसारभरि साझा भइरहेका छन्। नि:शुल्क YouTube सदस्यहरू प्राप्त गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। यदि तपाइँ YouTube सदस्यहरू किन्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई कम्तिमा धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र उच्च गुणस्तर, भरपर्दो सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रतिष्ठा भएको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट खरिद गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
केही अनप्रोलिक भिडियोहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
सोशल मिडिया राम्रो छ किनभने यसले ग्रहमा लगभग सबैलाई आवाज दिन्छ। जो कोहीले उनीहरूको विचार बटनको स्पर्शको साथ साझेदारी गर्न सक्छन्। तर राम्रो संग, पनि खराब आउछ, र प्रयोगकर्ताहरू सँगै आफ्ना दर्शकहरूको रूपमा सम्पूर्ण संसारका साथ खराब-मुँह ब्रान्डहरू भन्दा ठूलो क्षमता छ। यदि तपाईंले केहि नकारात्मक टिप्पणीहरू पाउनुभएको छ जुन तपाइँको भिडियो रेटिङमा चोट पुर्याएको छ, तपाईंको ग्राहकको गन्ती बढ्दै जानेछ यसले यो विरोध गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसलाई सामाजिक प्रमाण भनिन्छ, र यो कसरी मानिसले के गर्छ र सिकाउँछ। मानिसहरू अझ बढी मन पराउँछन् जुन उनीहरूले अरूलाई पनि जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ। विपरीत पनि सही छ; एक व्यक्तिले केही चीजलाई खराब वा अनपपुलरको रूपमा न्याय गर्दछ भने उनीहरूले यसलाई अस्वीकृत अन्य व्यक्तिलाई पनि देख्छन्। यूट्यूब ग्राहकहरू तपाईंको पक्षमा मतहरू जस्ता छन्, तिनीहरूको विचारमा सकारात्मक समीक्षाहरूको रूपमा। यदि तपाईंको च्यानलमा केही अनपोलुलर भिडियोहरू छन् तर ग्राहकहरूको उच्च संख्यामा छन् भने, अन्य प्रयोगकर्ताहरूले मान्नेछन् कि तपाईंको ब्रान्ड लोकप्रिय छ, र त्यहाँ र त्यहाँ केही नमनपराएकाहरूलाई माफ गर्न अधिक सम्भव छन्।
तपाईंको ब्रान्डको वैधता बढाउनुहोस्
YouTube च्यानलहरू केवल केहि सदस्यहरू छन् जस्तै तिनीहरू ब्रान्ड नयाँ छन्। नयाँ व्यवसायहरूले अझै पनि ग्राहकहरू आकर्षित गर्छन् किनभने सबैलाई "यो" स्थान पत्ता लगाउने पहिलो हुनुपर्दछ। तर, धूल बसोबास भएपछि तपाईंले ठूलो ग्राहक सूची सूची बनाउनु भएको छैन भने, मानिसहरू सोच्दै जाँदैछन् कि तपाईको ब्रान्डमा केहि गलत छ। यदि तपाईं नि: शुल्क यूट्यूब अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको ब्रान्ड जस्तो देखिन्छ कि यो लागि एकदम राम्रो नाम बनाउन पर्याप्त लामो वरपर छ। यसले तपाईंको ग्राहकहरुसँग विश्वास निर्माण गर्नेछ र तपाईंको व्यवसायको लागि थप उत्पादनहरू बिक्री गर्ने संभावना बढाउनेछ।
तपाईंको YouTube फलोअरलाई पालनपोषण गर्न आवश्यक छ
बस कुनै पनि सम्बन्ध जस्तै, एक स्वर्गीय सामाजिक मीडिया निर्माण पछि एक विशाल प्रतिबद्धता हो। सामान्यतया, व्यवसायहरूमा कर्मचारीहरू समर्पित सदस्यहरू हुनेछन् जसले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताहरू व्यवस्थापन गर्दछ। तर ती मानिसहरू निःशुल्क काम गर्दैनन्। व्यापारहरूले वार्षिक वेतन र फ्याक्सहरू कवर गर्न हजारौं डलर खर्च गर्दछन् र रेजर-पतली मार्जिनहरूसँग नयाँ कम्पनीहरू प्रायः जोगाउन सक्दैनन्।
पर्याप्त सोशल मिडिया उपस्थिति कायम पूर्ण-समयको काम हो किनभने यो सजिलै YouTube मा भिडियोहरू पोस्ट गर्न पर्याप्त छैन यदि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने। यसले समय र ऊर्जालाई सक्रिय रुपमा पोस्ट, साझेदारी, र टिप्पणी गर्न, जस्तै, हेर्न, र दर्शकहरूको साथ संलग्न गर्न आवश्यक छ, लगभग तपाईंको व्यापार एक वास्तविक व्यक्ति थियो। तर त्यो व्यक्तिगत जडान हो जसले YouTube ले यस्तो बहुमूल्य उपकरण बनाउँछ! तपाइँको व्यवसायलाई YouTube मा हुन आवश्यक छैन कुनै प्रश्न छैन; यो तपाईं कसरी जिम्मेवारी को लागी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो।
तपाईं आफैलाई ठूलो प्रोजेक्टमा लिन सक्नुहुनेछ, तर तपाईंसँग धेरै अन्य आवश्यक व्यवसाय चाहिन्छ जुन तपाईंको ध्यानको माग गर्दछ। नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरू प्राप्त गर्दै तपाईंको क्यान्सरबाट तपाइँको YouTube उपस्थितिको निर्माणको बोझले बोझ लिन्छ। तपाईं सजिलो आराम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंका अनुयायीहरू हेरचाह गर्न र महत्वपूर्ण व्यवसाय पहलहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न फिर्ता जान्नुहोस्।
खोजीहरूमा उच्च देखाउनुहोस्
हामी पहिले देखि नै यस बारे मा कुरा गरौं कि यूट्यूबको एल्गोरिदमले धेरै दर्शकहरूलाई यो स्पष्ट पार्दा धेरै ग्राहकहरूको साथ कसरी च्यानल पाउँछ। यस च्यानलको साथ यी च्यानलहरू खोजीमा रहिरहन्छ। यो जस्तै छ, चलो भन्छ कि तपाईं एक रेस्टुरेन्ट हो जुन सबै भन्दा ताजा veggies पकाउने को लागि जानिन्छ। यदि तपाईंको व्यवसाय 'यूट्यूब च्यानलसँग ब्लक चम्किलो चलन भन्दा कम ग्राहकहरू छन् भने, तिनीहरूका भिडियोहरू तपाईंको तुलनामा खोजीहरूमा उच्च देखिनेछ, तपाईंको सर्दीमा सलादले खरानीको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले, कुनै पनि कुराले तपाईंको सामाग्री कसरी राम्रो गर्दैन, ग्राहकहरूको कम संख्याले तपाईलाई कम ब्रान्डमा व्यवसाय गुमाउने जोखिमलाई चलाउछ।
तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि कडा मेहनत गर्नुभएको छ, र तपाईलाई ध्यान दिनुभएको निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ। YouTube ग्राहकहरू प्राप्त गर्नाले तपाईंको ब्रान्ड सूचीमा शीर्षमा देखा पर्न मद्दत पुर्याउँदछ, र तपाईंको सामग्री प्रतिस्पर्धा बढाउँछ।
यो हजारौं खाताहरूद्वारा प्रयोग गरिएको लोकप्रिय ट्रिक हो
बजारको लागि यूट्यूब यस्तो मूल्यवान उपकरण हो। च्यानल ग्राहकहरू प्राप्त हुँदैछ कि मानिसहरू हरेक दिन तपाईंको उत्पादनहरू हेर्न साइन अप गर्छन्। न केवल विपणन हो कुनै पनि रणनीति रणनीति YouTube को एक जरूरी भाग हो, तर मुक्त YouTube ग्राहकहरू उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो गोपनीय रहस्यहरू हो। तपाईं त्यहाँ गैर-जैविक ग्राहकहरू र अनुयायीहरूसँग खाताहरूको संख्यामा छक्क परेमा हुनुहुन्थ्यो। मोडलहरू, रेसका चालकहरू, यहाँसम्म राजनीतिज्ञहरूसँग तिनीहरूको सबै खाताहरू छन् YouTube खाताहरू र तिनीहरूको च्यानल लोकप्रियता उनीहरूको आँखा अगाडि बढ्दै जान्छ।
हामी प्रायः फेसबुक बाट निःशुल्क विज्ञापन क्रेडिट प्राप्त गरेका छौं। यो एउटै कुरा हो। फेसबुकमा पोष्ट बढाउने जस्ता अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने बारे सोच्नुहोस्, जसका दुवै दुबै तपाईंको ग्राहकहरू बढ्नको लागि व्यावहारिक तरिका हुन्। केवल फरक छ, फेसबुक र अन्य साइटहरूमा पोष्टहरू बढ्न खतरनाक छ किनभने तपाइँ अनुयायीहरूका निश्चित संख्या वा नियमित संलग्नताहरू पनि ग्यारेन्टी गर्नुहुन्न।
व्यापार राजस्व बढाउनुहोस्
कुनै पनि व्यवसाय जस्तै, तपाईं आफ्नो तल लाइन बढाउन चाहानुहुन्छ। तपाईंको ब्रान्ड बारे संलग्न भिडियोहरू साझेदारी गरेर संभावित ग्राहकहरूलाई जीवनका लागि ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न उत्तम प्लेटफार्म हो। यो सबैले यस तिर जान्छ। नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु संग, तपाईं आफ्नो व्यवसाय को लागि एक अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित बना सकते हो। त्यहाँबाट, तपाइँका भिडियोहरू अन्य साइटहरू जस्तै फेसबुकमा फैलाउन सक्छ, र तपाई वायरल जाँदाको मौका लिनुहुन्छ; र तपाईंको ब्रान्ड लाई लाखौं ग्राहकहरूलाई लुकाउने। हामीले अन्य फाइदाहरू पनि हेर्छौं, तर कुन कारणले गर्दा तपाइँले तपाइँको YouTube ग्राहक गणनामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार राजस्व बढाउने।
नमस्कार ... यो निःशुल्क छ!
सम्भावनाहरू यस लेखको शीर्षकले तपाइँको चासो जगाएको छ। नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरू एक दुर्लभ खोज हो, तर त्यहाँ त्यहाँ कम्पनीहरू छन् जसले सदस्यहरूलाई दिइरहेका छन्! यी केवल बटहरू होइनन् जसले तपाईंको खातालाई स्प्याम गर्दछ; तिनीहरू वास्तविक प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले संगठित रूपमा तपाईंको ग्राहकहरूको संख्या बढाउन र तपाईंको व्यवसायलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन मद्दत गर्दछ।
त्यसैले यो तपाईंको व्यापारको लागि के हो?
के सुसान वोजिकी भन्छन् निस्सन्देह सत्य हो; YouTube मा सबैको लागि केहि छ। यूट्यूबमा एक व्यवसाय को रूप मा, तथापि, यो केहि को लागी पर्याप्त छैन कोही , तपाईं को लागि केहि हुन प्रयास गर्नुपर्छ सबैलाई । अचम्मको रूपमा अचम्म लाग्न सक्छ, युट्युब नेटवर्क टेलिभिजन भन्दा पनि अधिक लोकप्रिय भएको छ, र पनि केबल। प्रयोगकर्ताहरूले प्लेटफर्म र च्यानलहरूसँग पछ्याउने एक अद्वितीय जडान महसुस गर्छन् जुन नजिकको नतिजाले यसलाई दिनको दिन "जीवन" मा दिन्छ। नि: शुल्क यूट्युब ग्राहकहरू प्राप्त गर्दै तपाईंको YouTube उपस्थितिलाई पछाडि सुरु र व्यापार सफलताको लागि ढोका खोल्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।
आफ्नो नि:शुल्क YouTube सब्सक्राइबरहरू छिटो पाउनुहोस् र आज YouTube फेमको लागि आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुहोस्!
XNUM Xth 27
YouTube मा प्रभावकारी लामो पुच्छर भिडियोहरू सिर्जना गर्नका लागि सुझावहरू
पक्कै पनि, YouTube Shorts ले सामाजिक सञ्जालमा तरंगहरू मच्चाइरहेको छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ कि धेरै मानिसहरूले लगभग विशेष रूपमा लामो पुच्छर भिडियोहरू हेर्छन्? यी लामो YouTube भिडियोहरू हुन्,...
XNUM Xth 20
कर्पोरेट YouTube च्यानल जम्पस्टार्ट गर्नको लागि तपाईंको गाइड
एक कर्पोरेट YouTube च्यानल अनिवार्य रूपमा एक व्यापार को लागी एक YouTube च्यानल हो। जबकि YouTube ले व्यक्तिगत र कर्पोरेट च्यानलहरू बीच फरक गर्दैन, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ...
30th मई 2022
राम्रो YouTube दृश्यताको लागि तपाईंले कतिवटा ट्यागहरू प्रयोग गर्नुपर्छ?
YouTube अब भिडियो-स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म मात्र होइन - यो खोज इन्जिन पनि बन्यो। वास्तवमा, गुगलको स्वामित्वमा रहेको प्लेटफर्म खोजको सन्दर्भमा गुगल पछि दोस्रो हो ...
यहाँ SubPals मा, हामी असाधारण सेवा र किफायती मूल्यहरूमा गर्व गर्छौं। यसको लागि हाम्रो शब्द मात्र नलिनुहोस् - तल हाम्रा ग्राहक समीक्षाहरू हेर्नुहोस्।
म एक सामग्री निर्माता हुँ, यसले वास्तवमै मद्दत गरेको छ किनभने Subpals ले मेरो च्यानलमा प्रत्येक 12 घण्टामा सदस्यहरू थपेको छ।
यो वेबसाइट बढ्दो YouTubers को लागी उत्कृष्ट छ जसलाई प्रेरणा चाहिन्छ। मैले 80 सदस्यहरूसँग सुरु गरें र अहिले मसँग 500 छन्।
- ऐडा ए।
म इन्टरनेटमा मेरो YouTube च्यानलका लागि सब्सक्राइबरहरू प्राप्त गर्न सानो सुझावहरू खोज्दै थिएँ जब मैले SubPals मा ठोकर खाएँ र म साँच्चै थोरै ब्याकबिट गर्दै थिएँ, यो घोटाला हुनेछ। सौभाग्यवश यो थिएन र मैले केही मिनेटमा राम्रो दस सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएँ! म अत्यधिक सिफारिस गर्दछु, थप रूपमा तपाइँ दिनमा एक पटक नि: शुल्क उनीहरूको सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ;)
- श्री पिग्मा पी।
उत्कृष्ट वेबसाइट, तपाईंले नि:शुल्क सदस्यताहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यसमा कुनै भाइरस पनि छैन। धेरै गजब। यो वेबसाइट हेर्नुहोस्। अहिले!
- ट्रिस्टन म
ठूलो मूल्य बिन्दुमा धेरै राम्रो सेवा, सदस्यता-आधारित मोडेल मनपर्छ। हेराइ र सब्स अर्गानिक छन्।
- एलेक्स एच।
नि:शुल्क योजनामा ​​पहुँच प्राप्त गर्न करिब आधा घन्टा लाग्छ, जसले तपाईंलाई प्रत्येक १२ घण्टामा १० सदस्यताहरूको न्यूनतम रकम दिन्छ, यद्यपि तपाईंले यसलाई म्यानुअल रूपमा सक्रिय गर्न आवश्यक छ। आफ्नो yt च्यानल बढाउन चाहने नयाँ व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी। साइट नेभिगेट गर्न सजिलो छ।
त्यहाँ बाहिरका सब वेबसाइटहरूका लागि सबै Youtube सबहरू मध्ये, Subpals सबै भन्दा राम्रो हुनुपर्छ, प्रत्येक 12 घण्टामा तपाईंले 10 सदस्यहरू पीस गर्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै उचित छ, निश्चित रूपमा केही व्यक्तिहरूले सदस्यता रद्द गर्नेछन् जुन दुर्भाग्यवश यस्ता वेबसाइटहरूले रोक्न नसक्ने कुरा हो। , मैले विगतमा सब pals प्रयोग गरेको छु र मेरो अनुभवबाट, यो YouTube सदस्यहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो।
- चन्द्र एक्स।
यति अचम्मलाग्दो धेरै सदस्यताहरू र लाइकहरूले विश्वास गर्न सक्दैन कि यो साइट वास्तवमा वास्तविक हो तर यसले धेरै राम्रो काम गर्दछ।
- एडम एस।
सबै भन्दा राम्रो सबै भन्दा राम्रो, सबैको लागि अत्यधिक सिफारिस गरिएको। तिनीहरूको सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस्, शाब्दिक रूपमा अद्भुत। म मेरो च्यानलको लागि नियमित रूपमा सदस्यता लिइरहेको छु।
युट्युबमा सदस्यहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका यसले केही समय लियो तर यो उपयोगी छ र काम गर्दछ त्यसैले म यसलाई सिफारिस गर्दछु!
- औरिमास के।
सब्सक्राइबरहरू वास्तविक हुन् जुन हामीले subpals.com बाट प्राप्त गर्छौं। म तपाईंलाई YouTube च्यानल प्रवर्धनको लागि subpals.com मा काम गर्न सिफारिस गर्नेछु। धन्यवाद
राम्रो सेवा। नि: शुल्क योजना काम गर्दछ
मेरो च्यानल बढ्न मद्दत गर्ने धेरै राम्रो सेवा। त्यहाँ धेरै साप्ताहिक उपहारहरू छन् जुन साँच्चै अद्भुत छन्।
मेरो youtube च्यानल JE Imposters ले SubPals बाट धेरै सदस्यहरू प्राप्त गर्यो! म एक हप्ताको लागि मात्र पोस्ट गर्दैछु र मैले पहिले नै 30 सदस्यहरू मन पराएको छु! यो आश्चर्यजनक छ कि यो साइटले वास्तवमै काम गर्दछ र म यसलाई अत्यधिक सिफारिस गर्दछु
अति राम्रो, म धेरै खुसी छु कि यसले वास्तवमा के प्रचार गरिरहेको थियो! तिनीहरूले तपाईंलाई केही मिनेटमा सदस्यता दिन्छन् र धेरै भरपर्दो देखिन्छ
- एमी ए।
विशेष गरी शुरुआतीहरूको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म!
- जुमान्जी ७१
मलाई यो वेबसाइट धेरै मन पर्छ। तपाईले केहि नि: शुल्क सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ केवल केहि व्यक्तिहरूलाई मनपर्ने र सदस्यता लिनको लागि।
- माटेउस एल।
यो प्रयोग गर्नको लागि धेरै सुरक्षित छ किनकि मैले यसलाई दुई हप्तादेखि कुनै समस्या बिना प्रयोग गरिरहेको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ कि मानिसहरू जो अलिकति छिटो बढ्न कोशिस गर्दैछन् तिनीहरू गएर यो साइट प्रयोग गर्नुपर्छ
धेरै राम्रो, 100% सिफारिस गरिएको, पूर्ण रूपमा काम गर्नुहोस्, यदि तपाईं ठूलो हुन चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको वेबसाइट हो। म youtube को लागी सिफारिस गर्दछु
- मोइसेस आर।
सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट कहिल्यै! फेरि प्रयास गर्नुहुनेछ! यदि तपाईंलाई आफ्नो च्यानलको लागि मद्दत चाहिन्छ भने, यसले यसलाई पूर्ण रूपमा मद्दत गर्नेछ!
- एलिजाबेथ एस।
यो वेबसाइटमा सामेल भएपछि म धेरै खुसी छु। र म यहाँ सम्मिलित हुन तपाईं सबैलाई सिफारिस गर्दछु।
- साइबरपंक २९
यो एउटा अचम्मको एप हो, यसले तपाईंलाई नि:शुल्क सदस्यता दिन्छ! निश्चित रूपमा तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दछ किनकि यी सब्सहरू धेरै उपयोगी हुन सक्छन्।
उत्कृष्ट! तपाईंले हरेक पटक लगभग 15 सदस्यहरू पाउनुहुन्छ र लगभग3गुमाउनुहुन्छ। म9दिनमा 30 बाट थोरै2मा गएँ!
मानिसहरूलाई सदस्यता लिएर सजिलै आफ्नो च्यानल बढाउनुहोस्! म तपाईंलाई यो प्रयास गर्न सिफारिस गर्दछु! तपाईलाई पछुताउनु पर्दैन र यो साइटको धेरै राम्रो सेवा छ। यदि तपाईंले यहाँ कुनै पनि सदस्यता जस्तै उद्यम वा अन्य चीजहरू खरिद गर्नुभयो भने, तपाईं छोटो समयमा प्रसिद्ध हुनुहुनेछ ...
- एनिस सी।
1 मिलियन भन्दा अधिक YouTubers मा सहभागी हुनुहोस् जसले नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरूको साथ उनीहरूको च्यानललाई सक्रिय रूपमा प्रचार गर्दैछ!
...र अरु धेरै!
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 SubPals (subpals.com)। सर्वाधिकार सुरक्षित। साइटमैप
तपाईंको YouTube खातामा स्प्याम टिप्पणीकर्ताहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने?
YouTube प्रतिलिपि अधिकार दावीहरू बनाम YouTube स्ट्राइकहरू